Fomba tsara hampiasana YouTube ho sehatra ara-barotra - YTpals
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny firotsahana sy ny fiovam-po amin'ny votoaty video, azonao atao ny manokatra ny fahafaha-mivarotra marika lehibe ao amin'ny YouTube. Amin'ny maha-motera fikarohana faharoa lehibe indrindra, ny sehatra fifampizaràna horonan-tsary an'ny Google dia afaka manampy anao hamorona marika izay hiroborobo amin'ny fotoana ho avy. Miaraka amin'ny paikady ara-barotra YouTube voafaritra tsara, azonao atao ny mampiseho ny marikao eo anatrehan'ny olona 2 lavitrisa mahery ary mandroso dingana maro alohan'ny mpifaninana aminao.
Na izany aza, ny varotra YouTube dia azo antoka fa tsy sombin-tsakafo, indrindra raha vao miditra amin'ny rano vaovao amin'ny varotra video ianao. Ny famoronana, ny fihazakazahana ary ny fitadiavam-bola amin'ny fantsona YouTube dia mety hahazoam-bola be, saingy mila mahafantatra fomba marani-tsaina ianao mba hahazoana tombony betsaka indrindra amin'ny varotra YouTube. Raha toa ianao ka mahatsiaro ho tsy mahalala, andao hitondra anao amin'ireto fomba ireto eto:
1. Amboary ny votoatinao video
Ny fomba iray azo antoka hahazoana ny tsara indrindra amin'ny varotra YouTube dia ny fikarakarana ny bitika ara-teknika. Amboary ny horonan-tsarinao mba hahitana fahitana bebe kokoa eo amin'ny lampihazo amin'ny alàlan'ny famoronana lohatenin-dahatsary manaitra ny saina—izay mitaona ny olona hanindry ny atiny. Ny fiheverana manan-danja amin'ny fanatsarana ny lohatenin'ny horonan-tsary dia ny fampiasana ny teny fanalahidy mety — ny teny fikarohana izay tadiavin'ny mpampiasa — ao amin'ny lohatenin'ny horonan-tsary sy ny famaritana video. Ankoatra izany, zava-dehibe ny mamorona lohateny fohy miaraka amin'ny tarehintsoratra 60 ambony indrindra. Ny lohatenin'ny horonan-tsary sy ny famaritanao dia tokony ho mazava sy mazava ary tokony hanome ny mpijery antony hijerena ny atiny.
2. Amboary ny thumbnails
Ankoatra ny lohatenin'ny horonan-tsary sy ny famaritana horonan-tsary, ny thumbnail amin'ny votoatin'ny horonan-tsary dia misy fiantraikany lehibe amin'ny tahan'ny click-through (CTR). Ireo manam-pahaizana momba ny varotra YouTube dia nanantitrantitra imbetsaka fa ny horonan-tsary dia tokony hanana thumbnail mahomby mba hametrahana sy hanazavana ny andrasan'ny mpijery. Ny thumbnails dia tokony hahaliana ny mpijery anao, mameno azy ireo amin'ny hagagana momba ny zavatra hitranga manaraka amin'ny horonan-tsaryo. Azonao atao ny mampiasa Photoshop na fitaovana fanitsiana horonan-tsary hanamboarana ny thumbnails. Rehefa miteraka fihetseham-po sy mitantara tantara ny thumbnail video-nao, dia azo inoana fa hahazo fijery manaitra ny atiny video.
3. Mifikitra amin'ny halavany tsara indrindra
Ny toro-hevitra manaraka amin'ny fampiasana YouTube ho sehatra ara-barotra dia ny manatsara ny halavan'ny atiny video. Amin'ny fikatsahana fifamatorana ambony kokoa, ny manam-pahaizana momba ny varotra YouTube dia mifantoka amin'ny fitambaran'ny fotoana fijerena ny lahatsariny. Ny tena tsara dia tsy tokony hihoatra ny 5 minitra ny faharetan'ny atiny video. Izany anefa dia miankina amin'ny toetra sy ny karazana votoaty avoakanao. Na dia tsy misy fitsipika sarotra sy haingana aza dia azonao atao ny manandrana ny halavan'ny horonan-tsary mba hahatongavana any amin'ny toerana izay mahatonga ny fantsonao hifanerasera betsaka indrindra. Na inona na inona, tokony hifantoka amin'ny famoronana horonan-tsary avo lenta ianao ary hahatonga azy ireo hampahafantarina, fohy ary mahaliana.
4. Mandehana ara-tsosialy
Ny fampiroboroboana cross-platform dia afaka manampy mafy ny paikadin'ny varotra YouTube anao. Mba hanamafisana ny fahafahan'ny fantsona YouTube anao dia tsy maintsy manatrika amin'ny sehatra izay tena mavitrika indrindra ianao. Ny tanjona dia ny hametraka ny atiny video ho eo anoloan'izy ireo. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny famoriam-bola amin'ny tambajotra sosialy samihafa—na Facebook, Twitter, Instagram, na LinkedIn. Fantatry ny mpivarotra Savvy ny lanjan'ny vondrom-piarahamonina sy vondrona media sosialy amin'ny tontolon'ny varotra ankehitriny. Ireo no toerana ahafahan'ny fantsona YouTube anao mahazo vahana be. Raha mizara ny horonan-tsarinao amin'ireo fantsona ireo ianao, dia azo antoka fa hanitatra ny fidiranao ianao ary hampiakatra avo kokoa ny fantsonao.
Ireo teboka voalaza etsy ambony ireo dia vitsivitsy monja amin'ireo fomba maro ahafahanao mandeha momba ny varotra YouTube ary mamoaka ny mety ho fidiram-bola lehibe amin'ny sehatra. Zava-dehibe ny hieritreretanao amin'ny famoronana rehefa mampihatra ireo toro-hevitra ireo. Raha tianao mividy tia YouTube, mpanjifa, ary fanehoan-kevitra, azonao isafidianana YTpals, sehatra iray afaka mampitombo ny fantsona YouTube anao.
Fomba tsara hampiasana YouTube ho sehatra varotra avy amin'i YTpals Writers, 16 May 2022
Paikady marketing YouTube mahomby amin'ny orinasa kely
Nanjary fitaovana an-tserasera mahery vaika ny tsenan'ny horonantsary hivarotana orinasa kely, ary ny YouTube dia nanangana ny tenany ho iray amin'ireo fitaovana marketing lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny media sosialy. Maherin'ny…
Ahoana no fomba hamoronana horonantsary YouTube azo vidiana tsara indrindra?
Tranga lehibe i YouTube amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao izay ny marketing dizitaly sy media sosialy no tena mitondra ny sehatry ny marketing. Ny sehatra an-tsehatra an'ny Google fananana an-Google dia manana mpampiasa isam-bolana maherin'ny 2 miliara manerantany - zavatra iray…